Wafdi ka socda dowladda somaaliya oo shir kaga qayb galaya dalka Tunisiya – Radio Daljir
Wafdi ka socda dowladda somaaliya oo shir kaga qayb galaya dalka Tunisiya
Juunyo 19, 2019 4:21 g 0
Shirkan oo Sanadkiiba mar la qabto ayaa waxaa diiradda lagu saaray qodobbo muhiim u ah horumarinta Wasaaradaha qorsheynta ee Dalalka Carabta.
Wasiir ku xigeenka wasaaradda qorsheynta, maal-gashiga iyo horumarinta dhaqaalaha Soomaaliya, Fahmo Maxamed Nuur , oo shirkaasi ka qeyb gashay ayaa sheegtay in ay Dowladaha Carabta uga warbixisay howlaha adage e Dalka ka socda.
Marwo; Fahmo, ayaa intaa ku dartay in ay si gaar ah diiradda u saartay gaar diyaarinta qorshaha Sagaalaad ee horumarinta Qaranka iyo hannaanka uu ku socda geedi socodka wada-tashiga iyo qoristiisa.
Sidoo kale Wasiir Fahma Maxamed Nuur, ayaa ka hadashay xaaladda xilligan Soomaaliya ay taagan tahay iyo sidii loo Gacan qaban lahaa, dhinacyada sare u qaadista waxbarashada shaqaalaha iyo aqoon yahannada ka howlgala xarumaha Dowladda.
“Waxaan marka hore salaan diirran idinka wadaa Wasiirka Wasaaradda Qorsheynta iyo dhammaan Shacabka Soomaaliyeed, waxaan halkaan ka cadeeynaa in Soomaaliya dhibaato kala duwan ka dib hadda waxay mareysaa meel wanaagsan, waxay u baahan tahay Gacan siin oo ay ka mid tahay sidii kor loogu qaadi lahaa Khibradda Dhallinyaradda Soomaaliyeed ee ka midka ah hay’addaha Dowladda”ayay tiri Wasiir ku xigeenka Wasaaradda qorsheynta.
Madaxda joogtay shirka ayaa si weyn uga wada hadashay sidii loo tayayn lahaa Wasaaradaha qorsheynta Dowladaha Carabta iyo in tababarro loo fidiyo shaqaalaha.